प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा नदिने अडानमा, अब के गलार्न प्रचण्ड ? — onlinedabali.com
प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा नदिने अडानमा, अब के गलार्न प्रचण्ड ?
काठमाडौं । यतिबेला सत्तारुढ नेकपामा आन्तिरिक बिबादले चर्को रुप लिएको बेला प्रधानमन्त्रिको राजिनामा माग हुदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजीनामा मागेको सुन्नमा आएको भन्दै राजीनामा नदिने प्रस्ट्याएका छन् । अहिले नेकपाभित्र चर्को विवाद उठिरहेको बेला ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा राजिनामा नदिने बताएका हुन् ।
उनले भने ’मैले रिपिटेड्ली भन्या छु। फेरि केहीले खोई त राजीनामा भन्दै मागिरहेका छन् भन्ने सुन्छु है । तयारी गर्दै छन्। यो तयारी अन्तिममा के हुनेछ… केही पनि हुनेवाला छैन।’
उनले प्रश्न गर्दै अगाडि भने, ’मेरो लागि होइन, देशको लागि हो। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन।’ उनले आफ्नो रहरले प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै जनताको आवश्यकता र समर्थनले भएको दाबी गरे।
यसैबिच हिजो मात्र (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शितल निवासमा भेट गरेको छन् । नेकपाभित्र विवाद चर्किएका बेला गौतम शितल निवास पुग्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
आइतबार उपाध्यक्ष गौतम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा भएको भेलामा पनि सहभागी भएका थिए । नौ सदस्यीय सचिवालयमा गौतम निर्णायक अवस्थामा छन् । गौतम जता लाग्यो, उतै बहुमत पुुग्छ ।